Ny Valosoa Vaovao, 17 Jolay 2018. | Mouvement des Citoyens Malagasy de Paris
← Hira Faneva, “Vonona aho hamerina ny hambopo maha-Malagasy”, Filoha Ravalomanana.
Betafo-Savorovoro. Zaza iray maty, trano may ary fiara potika. →
Ny Valosoa Vaovao, 17 Jolay 2018.
Publié le 17 juillet 2018 par Mouvement des Citoyens Malagasy de Paris
Hamerina ny hambompo maha-Malagasy
Nanatrika ny fanamarihana ny fetim-pirenena Frantsay teny amin’ny trano fonenan’ny Ambasadaoro eny Ivandry ny sabotsy teo ny Filoha Marc Ravalomanana, Filoha Nasionalin’ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM), nahazo fanasana tamin’izany lanonana izany ny tenany. Tamin’io fotoana io koa no nanararaotan’ny mpanao gazety nametraka fanontaniana taminy mahakasika ny raharaham-pirenena. Nambarany tamin’izany fa efa vonona hatramin’ny ela ho amin’ny fiatrehana ny fifidianana izy sy ny antoko TIM, ny KMMR ary ireo rehetra tsy ankanavaka mpanohana azy.
Efa tafaresaka tamin’ny fianakaviambe iraisam-pirenena eto amintsika ny tenany, nambaran’izy ireo hoy i Dada fa vonona ireo vahiny hanampy antsika amin’ny fanatanterahana fifidianana, na izany aza hoy izy tokony hanana fanamby hatrany isika ary vonona aho hoy izy ny hamerina ny hambompo maha-Malagasy. Momba ny tsy fandriampahalemana miseho lany ankehitriny, ny kidnapping,… tena mampalahelo izany toe-javatra izany hoy ny Filoha Marc Ravalomanana ary tokony hitadiavan’ny fitondram-panjakana vahaolana matotra sy maharitra.
Any New-York ny ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana
Any New-York renivohitra ara-toekaren’i Etazonia amin’izao fotoana ny ben’ny tanànan’Antananarivo Lalao Ravalomanana miatrika ny fihaonana iraisam-pirenena momba ny fampandrosoana ny vondrom-bahoakam-paritra dia ny fampandrosoana ny Kaominina sy ny governemantam-paritra izany: Local and Regional Governement High Level Political Forum na dinika ara-politika avo lenta momba ny ODD (Objectif de Developpement Durable), na vinan’ny fampandrosoana maharitra.
Anisan’ny olana eto amintsika ny tsy firindrana ny any tsy fifankazahoana mihitsy eo amin’ny fifandraisan’ny governemanta foibe, na ny governemantam-paritra ihany koa sy ny Kaominina ankehitriny, izany dia anisan’ny sakana amin’ny fampandrosoana ny fiadidiana ny tanàna. Olana anisan’ny dinihana amin’izao fivoriana iraisam-pirenena any New-York izao ny mahakasika izany.
Misy sahady ny talem-paritra mamadika palitao
Zary lasa firesaky ny olona ny fahitana mpanao politika mamadika palitao isaky ny misy ny hetsika mamaivay eto amin’ny firenena. Fantatra fa efa misy amin’ireo Talem-paritra eny anivon’ireo sampandraharaha aty Alaotra Mangoro no efa namadika ny azy. Mbola tsy maina akory ny ravina nihinanana dia efa namadika sahady ny sasany vokatry ny fahatahorana sao ho very seza. Mitetika ny ho Talem-paritra mandram-paharetiretiny angamba hoy ny rehetra ka aleo mamadibadika izay azo avadibadika aloha.
Efa niaina tao anatin’ireo antoko lehibe tamin’ireny taona 1991 no niverina ho AREMA ary avy eo nivadika ho T.I.M ary nanaradrenirano tamin’ny tetezamita avy eo nivadika ho H.V.M dia izao nivadika ho MAPAR izao indray. Misy ireo mangina tsy ahitan-teny firy any anatin’ny sampan’asa nametrahana azy saingy eo kosa ireo matahotra mafy ny sezany ka lasa nihazakazaka namonjy nanova loko haingana sao tratran’ny fitsokan’ny rivotra tampoka. Nahatsara zavatra mihitsy ny nananganana ity governemanta iraisana ity hoy ny mponina fa nahafahana nanavaka ireo mpanao politika mahatana ny etika eo amin’io raharaha io, sy ireo izay faly ny amin’ny hamikitra amin’ny seza fotsiny ihany. Fantatra fa misy ireo izay efa tena manam-pahazarana amin’ity famadihana palitao ity ary tena manana traik’efa mihitsy saingy niseho ho hitam-bahoaka nony farany satria efa betsaka ny palitao navadika hatramin’izay.
Miady an-trano sahady ihany koa ireo vondrona politika lehibe aty Alaotra amin’izao fotoana izao noho ny resaka toerana amin’ny samy te-ho lohany hitantana izany. Isan’ny ahitana izany ny mpanohana an’i Andry Rajoelina sy Hery Rajaonarimampianina, izay tena hifandroritana tokoa ny hitantana azy. Ho an’itsy voalohany dia ny filazana fa izahay no nanomboka ny tolona ka izahay no tokony hitantana azy io. Itsy farany kosa indray dia ny resaka seza mivantana mihitsy no antony tena iadiana mafy, hany ka zary mihatakataka avokoa ireo mpanohana azy ireny.
Tonga ny fotoana tokony hijeren’ny fanjakàna ireo mpampianatra
Mitana ny sain’ny olom-pirenena ankehitriny ny lafiny fanabeazana eto Madagasikara , na ny marina kokoa ny fitokonan’ny mpampianatra mpanabe . Mikatso tanteraka ny fampianarana manerana ny Nosy , na lazain’ny fanjakàna aza fa ampahany amin’ireo mpampianatra no mitokona. Tsy mihemotra hoy ny minisitra Horace Gatien ny fanadinam-panjakàna fa tsy maintsy tanterahana araka ny daty izay efa napetraky ny minisiteran’ny fanabeazana .
Misy ny milaza fa lasa takalon’aina ny ankizy madinika amin’ity toe-draharaha ity, koa mipetraka eto ny fanontaniana , iza no fositra amin’izany, ny mpampianatra mitokona ve sa ny mpitondra? Alaim-panahy isika hilaza hoe ny mpitokona, mety ho marina izany nefa kosa andao mba hojerena marina hoe inona ny olana tena itadiavan’izy ireo fanovana ? mangataka tambin-karama karazany maromaro izy ireo, fa nahoana moa ? Misy ary tsy azo lavina ny tsy fitoviana mihoa-pampana eo amin’ny mpampianatra sy ny mpiasa-panjakàna mitovy aminy amin’ny fomba fitantanana eo amin’ny sehatry ny asam-panjakana. Misy ny mahazo tombony be ary misy kosa ny anjorombala.
Efa nisy fotoana ireo mpampianatra nitokona , fa ny hita hatramin’izay dia misy foana ireo mamono afo ao anatiny ka lasa tsy tanteraka hatramin’ny farany ny fitakiana fa very anjavony teny foana . Ankehitriny , tonga kosa ny fotoana tokony hijeren’ny fanjakàna ny mikasika ireo mpampianatra eto Madagasikara raha tena mijery ny tombontsoan’ny zaza Malagasy izy ireo . Farahidiny raha samy mpiasam-panjakàna izany mpanabe izany eto amintsika , koa mila vahàna indray mandeha anefa izy ity mba tsy ho sorona ny zaza Malagasy , tsy adala akory ireo mpampianatra ireo ka tsy ahafantatra ny tokony ho zakan’ny fanjakàna omena azy ireo , fa hatreto dia toa ny fandrahonana indray no mitady ahazo laka .
Tsy hihemotra koa ny any Vakinankaratra
Mbola mafana sy mihenjana ny fitokonan’ny mpampianatra eto Vakinankaratra amin’izao fotoana. Raha ho an’ny fampianarana ankapobeny dia mbola mafana dia mafana ny resaka tolona ho an’ny mpampianatra eto Vakinankaratra. Ankilany dia mbola nafana ary niha-nafana kosa ny tolona nataon’ireo vondron’ny sendika marobe izay mbola manohy ny tolona teo amin’ny kianjan’ny Dren Vakinankaratra.
Nambaran’ireo mpampianatra marobe fa tsy hiato ny tolona hataon’izy ireo raha tsy voavaly ny fitakiana ary tsy eken’izy ireo ny ataon’ireo mpamono afo dia ny ANNEFA izany. Tonga tao an-toerana mihitsy ny mpandrindra nasionalin’ny Sempama Nosy, izay nanana anton-dia ho any Ambositra saingy nivily teto Antsirabe nanotrona ireo mpampianatra. Nambaran’izy ireo fa tsy hisy hampianatra izany ary mbola hikatona avokoa ny sekoly na dia nilaza ny hiasa aza ny andaniny ary tsy matahotra ny ramatahora ataon’ny mpîtondra fanjakana izy ireo.
Tetsy ankilany anefa dia nandray fanapahan-kevitra ny Gropy ANNEFA fa hanomboka hampianatra ary handray ireo mpianatra hiatrika fanadinana amin’ity herinandro miditra ity, ho fandraisana an-tanana ny ho avin’ny zaza Malagasy mba tsy ho sorona amin’izao fitakiana izao satria efa nitsotra ny fitondram-panjakana fa izay aloha no azo atao. Namory ireo mpampianatra mpomba azy izy ireo tao amin’ny efitrano malalaky ny Cisco Antsirabe faharoa ary nifandamina amin’ny fiatrehana izay fiverenana mampianatra izay. Nambaran’ny mpandrindram-paritry ny ANNEFA Vakinankaratra fa tsy manery ireo mpampianatra mbola te hanohy ny fitokonana izy ireo, saingy toherin’izy ireo kosa ny fanerena ny mpampianatra tsy maintsy hitokona sy ny fandrahonana ho faty mahazo azy ireo.
Taona fotsy na tsia
100 000 Ar indray mandoa ihany no vahaolana
Taona fotsy na tsia, 100 000 Ar indray mandoa amin’ity volana ity, na amin’ny volana ambony ihany no vahaolana ny amin’ny tsy hisian’ny taona fotsy hoy ireo mpanabe manerana ny Nosy mitaky ny zony amin’izao fotoana. Rubrique 1 na zavatra iray ao amin’ny karama ihany io takian’izy ireo hatao indray manefa io aloha, fa ny 100 000 Ar ampitomboina 4 kosa dia hatao tsikelikely ny fanefana azy hatramin’ny taona 2020. Raha fiakarana 100 000 Ar isaky ny mpanabe io aloha, dia azo lazaina ho kely ihany miohatra amin’ny fitakiana teo amin’ny sehatry ny asam-panjakana hafa, na sehatr’asa hafa ary efa azony raha vao nihetsika izy ireo. Eo amin’ny 160 000 eo ny isan’ny mpiasam-panjakana amin’ny sehatry ny fanabeazam-pirenena eto amintsika, ka raha io fiakarana 100 000 Ar dia tokony ho zakan’ny kitapom-bolam-panjakana tsar any fanefana azy.
Mandefitra manana rariny ny mpanabe hatramin’izay, ka rariny raha ho valian’ny fitondrana ny hetahetan’izy ireo tsy hisian’ny taona fotsy izay efa manangasanga. Arak’izany, mitohy hatrany ny hetsika fitakiana ataon’ny Mpampianatra Mpanabe eo an-tokontanin’ny Ministeran’ny Fanabeazam-pirenena etsy amin’ny Tranoboribory Anosy. Natokana ihany koa ny andro omaly ho andro fanehoam-piaraha-miory tamin’ny fianakavian’ilay tovolahy 22 taona, mpianatry ny Lycée Antsohihy, TA6, nodimandry ny 06 Jolay lasa teo, vokatry ny fanadinana Eps/Bacc tsy ampy fanomanan-tena. Manambara ankoatra izany ireo mpitolona fa tsy miverin-dalana ny fitakiana: mitohy ny tolona.
Momba ilay fampitahorana fanerena ny mpampianatra hiverina hampianatra nataon’ny fitondrana nivoaka tamin’ny filan-kevitry ny ministra ny faran’ny herinandro teo, misy ny hafatra nalefan’ny mpampianatra avy any amin’ny faritra ho an’andriamatoa Ministry ny Fanabeazam-pirenena: manoloana ny naoty navoakan’ny ministera, izay nosoniavin’ny sekretera jeneraly mamerina ny mpampianatra handray ny asany omaly alatsinainy sy anio talata, ireo mpampianatra rehetra ao anatin’ny Sempama Nosy dia manambara fa manana zo haneho hevitra sy hitaky ny zo ary afaka mitokona mitaky araka ny voalaza ao amin’ny lalampanorenana sy ao anatin’ny lalàna mifehy ny mpiasam-panjakana, mbola ao koa ny ao amin’ ny OIT na ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny Asa. Zo fototra ny mitaky ny zony hoy izy ireo, tsy mbola hampianatra izahay raha tsy mivaly ny fitakianay, miara-manao sonia ity taratasy ity ireo mpampianatra avy any amin’ny Faritra. Masina ny tanindrazana rehefa omena hasina ny mpanabe ».
Ifandimbiasan’ny jiolahy tetezina ireo mpandraharaha madinika
Ny zoma alina lasa teo, tokantrano mpanao an’ireny akoho fakana nofo ireny no notafihin’ny jiolahy mitondra fitaovam-piadiana tao amin’ny zana-bohitr’i Tanambao fokontany Ambohimasina kaominina Ambatondrazaka renivohitra. Ny vola no voalaza fa isan’ny nokarohin’izy ireo tamin’io fotoana io. Ankoatra ity tokantrano ity dia nisy ihany koa tao akaikin’ny kianja ao Ambohimiangaly izay mbola trano manodidina an’i Tanambao ihany no lasibatr’ireo jiolahy.
Ny alin’ny sabotsy indray kosa dia nilatsaka tao an-tampon’ Antanambao ireo jiolahy mirongo fiadiana ireo nanafika mpandraharaha madinika ihany koa. Tsy nisy hatreto ny naratra na namoy aina fa ny totalin’ny zavatra very no fantatra fa maromaro ihany. Mitaintaina hatrany ireo mponina any an-toerana vokatr’izany satria zary ho isak’alina dia misy hatrany no lasibatra ao amin’izy ireo. Tsy nitazana fotsiny ny mpitandro filaminana fa nandray ny andraikiny ary manao ny fisafoana sy midina ifotony manao fanadihadiana ary voalaza fa efa misy ny ahiahiana amin’izao fotoana izao mahakasika ity fanafihana lava ity.
Liva – KMFB
Miantso ny FFFKM handray andraikitra
Maneho ny heviny momba ny raharaham-pirenena indray Andriamatoa Liva Razafitsiferana na i Liva KMFB (Komity Miaro ny Fiainam-Bahoaka). Iaraha-mahafantatra hoy izy fa misedra olana goavana ary miaina ao anatin’izany ny firenena Malagasy sy ny vahoakany ankehitriny, noho ny fanahiniana sy fanapotehana ary tsy fahaiza-mitantana nataon’ny mpitondra fanjakana ankehitriny. Samy miezaka ny mitady vahaolana ialana amin’izany avokoa ny olom-pirenena maro, na olon-tsotra, na mpanao pôlitika, na mpitondra fanjakana, sns… Ho an’ity farany, dia ny fanatanterahana ny fifidianana amin’ity taona 2018 ity , izay hatao ao anatin’ny fahavaratra sy ny tsy fahandriampahalemana hono no mety araka ny hevitr’izy ireo.
Etsy ankilany anefa dia maro ihany koa ny fanehoan-kevitra avy amin’ny olon-tsotra sy mpanao pôlitika, izay mitaky ny hanaovana ny DINIKA FANORENANA IFOTONY alohan’ny hirosoana amin’izany fifidianana izany.Ny malagasy samy malagasy tsy tsabahan’ny vahiny no hifandinika hitady izay tena vahaolana marina ho an’ny fireneny, izay mitondra mankany amin’ny fampandrosoana sy ny fahaleovantena marina no mafy orina. Ho an’Andriamatoa Liva mitarika ny KMFB, dia samy ilaina avokoa ary tsy hirosoana ny dinika ifotony sy ny fifidianana, kanefa mialoha ireo, dia tsara indrindra raha mialoha ireo ny FAMPIHAVANANA eo amin’ny samy malagasy. Sarotra tokoa mantsy no inoana fa ho afaka miroso amin’izany dinika fanorenana ifotony sy fifidianana izany raha toa ka mbola vahoaka tsy manam-pitiavana, feno fifankahalana sy lolom-po no hoe hitady vahaolana ho an’ny firenena izany. Mila mifankatia sy mifamela isika mba hahatongavana amin’izany firenena vanona izany. Didy ary asa avy amin’Andriamanitra ny fampihavanana.
Izany indrindra no mahatonga ny KMFB hiantso ny FFKM handray andraikitra sy hanohy ny fampihavanana izay efa natombony ny taona 2001. Ny fiangonana no solontenan’Andriamanitra afaka hanatanteraka izany asa izany hoy Andriamatoa Liva. Ny FFKM ihany koa dia manana ireo ondriny marobe manerana ny Nosy. Noho izany, dia Ray aman-dReny sady to-teny amin’ny vahoaka malagasy izy ireo, ka tokony hijoro sy ho sahy handray izany andraikitra masina sy sarobidy ho an’ny firenena malagasy izany. Manome toky ihany koa ny KMFB fa tsy hamela azy ireo ho irery fa hanohana azy ireo hatramin’ny farany amin’izany adidy masina izany amin’ny alalan’ny fanentanana sy fandresen-dahatra ny vahoaka mba hametrahana ny FFKM eo amin’izany toerana hitarika ny fampihavanana izany.
Tsy hita taratra ny fitoniana hatramin’izao
Mivoatra ary miroso mankany amin’ny fifidianana ihany aloha hatreto ny raharaham-pirenena eto Madagasikara. Mirona manaraka izany ihany koa ny fanehoan-kevitra isan-karazany voizina amin’ny haino aman-jery sy ny filazam-baovao. Isan’ny manaraka izany akaiky hatrany ary mitondra ny fanehoan-keviny hifanaraka amin’ny soratra masina i Pr Harimalala Joseph, izay mampifandray izany amin’ny fiainam-pirenena Malagasy mba hanjakan’ny tenin’Andriamanitra sy ny hafatra avy amin’ny Tompo. Nambarany ary fa efa tokony ho ao anatin’ny fitoniana tanteraka ny Malagasy izay miandrandra ny fotoam-pifidianana marina sy madio tokoa amin’ity taona ity. Nambarany anefa fa misy hatrany ny trangan-javatra mahazendana sy mampametram-panontaniana satria tsy tena hita izay fitoniana izay na dia mivoy izany avokoa aza ny olon-drehetra, indrindra ny filoham-pirenena.
Ny hita ho an’ity farany dia am-panetren-tena no ilazana hoy i Pr Harimalala Joseph, fa toa vao mainka mitombo ny fitakiana etsy sy eroa. Izany rehetra izany hoy ity mpandinika ity dia nohon’ny tsy firaharahian’ny filoham-pirenena an’Andriamanitra fa sondriana manandra-tena isan’andro isaky ny misy hetsika ataony. Raha tsiahivina ohatra ny tamin’ny 26 jona lasa teo dia ny vavaka ho fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra indray no natao farany, araka ny tenin’Andriamanitra ao amin’ny Samoela voalohany 2:30 manao hoe: “Fa izay manome voninahitra Ahy no homeko voninahitra, ary izay manamavo Ahy no ho afa-baraka”. Mampieritreritra izany Andriamatoa filoha satria dia mihevitra ny tenanao ho Andriamanitra ve hianao, ka manao tsinontsinona azy? Toa izao ataonao izao mantsy no mahatonga an’Andriamanitra ho tezitra amin’ny mpitondra fanjakana ka nahatonga an’i Farao mpanjakan’i Egypta nofaizina. Koa ampanetren-tena Andriamatoa filoha no hiantsoana anao mba handinika ny tenin’Andriamanitra ao amin’i Ezekiela 32:2-4, izay manao hoe: “Ry zanak’olona, manaova hira fahaleovana ny amin’ny Farao, mpanjakan’i Egypta, ka ataovy amin’ny hoe: nanao ny tenanao ho tahaka ny liona tanora tamin’ny firenena hianao kanjo tahaka ny Dragona ao anatin’ny rano be, ary nitsoriaka teny amin’ny oninao hianao dia nanakobakobana ny rano tamin’ny tongotrao ka nahaloto ny ony. Izao no lazain’i Jehovah Tompo: ny vahoaka betsaka tafatambatra no ho entiko mamelatra ny haratoko aminao, ary hakarin’ireny amin’ny haratoko hianao, dia hatsipiko eny an-tanety hianao ary hariako any an-tsaha, dia hampitangoroniko eo aminao ny voro-manidina rehetra, ary homeko hivokisan’ny bibidia rehetra ny tenanao”, satria manomboka miantefa aminao io hafatra io, raha sanatria tsy hiova hianao.
Ny ilazana izany mantsy dia tsikaritra indray tato ho ato ny fisehosehoanareo mpitondra amina hetsika ara-pivavahana goavana kanefa dia tsy izany no zava-misy ka mahatonga ny tenako hampahatsiahy ny tenin’Andriamanitra ao amin’i Marka 7:6 manao hoe: “Ity firenena ity manaja Ahy amin’ny molony, fa ny fony kosa lavitra Ahy”. Ny tiana hambara dia toy ny manao mpitari-bato vilam-bava ihany ny fitondram-panjakana satria raha fitoniana no dradradradraina kanefa dia baomba mandatsa-dranomaso no valiny. Koa eto anatrehan’izao zava-manahirana maro manjo ny firenena izao, sy ireo fitakiana maro mbola hataon’ireo mpampianatra sy ny mpianatra ary ireo sendikalista isan-karazany maro samihafa ireo dia aoka handinika tsara hianareo mpitondra raha toa ka tianareo tokoa ny hisian’ny fitoniana marina hiatrehana ny fifidianana satria hoy ny tenin’Andriamanitra ao amin’ny Jaona Voalohany 2:17 manao hoe: “Mandalo izao fiainana izao sy ny filàny, fa izay manao ny sitrapon’Andriamanitra no maharitra mandrakizay”.
TIM sy ny Boriborintany faharoa
Niaraka nanao fanadiovana faobe
Efa asa fanaon’ny kaominina Antananarivo renivohitra (CUA) andavanandro ny fanadiovana ny tanàna, izay araka ny toromariky ny ben’ny Tanàna Lalao Ravalomanana . Niavaka kosa ny faran’ny herinandro teo satria niara-nisalahy nanadio ny lalana sy ny lakan-drano nanomboka teo Ambanidia nihazo an’ Ambatoroka sy Tsiadana ny avy ao amin’ny boriborintany faha- 2 notarihin’ny delege Razafindraibe Jacques sy ny filohan’ny DISTIM ary ny mpikambana Tiako i Madagasikara (TIM) ao an-toerana .
Nomarihin’ny delegen’ny boriborintany faha 2 Jacques Razafindraibe , fa mila madio Antananarivo renivohitra , efa manao ny ezaka rehetra izahay hoy izy hampadio ny Tanàna , saingy kosa ilaina ny fahatsiarovantenan’ny mponina mba hitandro mandrakariva ny fahadiovana ho antoky ny fahasalamàna , rehefa tsy mandoto ianao hoy izy dia efa naman’ny manadio . Hiitatra any amin’ny toerana hafa ny asa fanadiovana fa tsy hipetraka amin’ny toerana iray.
Galerie | Cet article, publié dans Non classé, est tagué Ny Valosoa Vaovao 17 Jolay. Ajoutez ce permalien à vos favoris.